Ntughari akwukwo nke obere akwukwo obere nkuzi China Manufacturer
Guangzhou New Magnetics Technology Co.,Ltd [Guangdong,China] Ụdị ahịa:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide Onye na-emepụta ihe:11% - 20% N'ezie:ISO9001, RoHS, Test Report Nkọwa:Akwụkwụ na-ejigide ya,Eke ederede,Ede ederede blackboard
Home > Ngwaahịa > Igwe eji magnetik anabata ihe > Onwe ihe nrapado nke ogwe > Ntughari akwukwo nke obere akwukwo obere nkuzi
Ihe Nlereanya.: BCKP-NS50-PSA
Ihe Edere Eke Na - agụ Ihe Na - enweghị Atụ
Ihe nkedo nke onwe ayi Whiteboard na ngwaahịa Nkebi Nke noBCKP-NS50-PSA , EN71 Na-akwado iwu ROHS, enweghi oke nkuku na nkuku ya ma o nweghi ihe o bula ma o bu mmerụ ahu na enweghi ike ijikwa. Nwekọrịta onwe onye Whiteboard bụ ụdị mgbanwe whiteboard na nrapado , mfe ịkpụ, ehicha, gbagọrọ agbagọ, kpụkọta, ma ọ bụ nwere ike ịmịnye n'ime ihe ọ bụla. Ịchekwa ohere na nnyefe ngwa ngwa. N'ihi nrapado siri ike, ihe nkedo a na-edozi ngwa ngwa iji wụnye ya ma ghara ịdapu ngwa ngwa . Dị ka whiteboard, ọ nwere ezigbo ide ederede ma kwụsị. Na-ejikọta maka ọtụtụ pen dị iche iche, a ga-ehichapụ akara na n'ime ọnwa. Ka Magnetik ọkọbọde Whiteboard mpempe akwụkwọ mere site agwakọta ígwè powder na plastic (CPE wdg), ọ nwere magburu onwe magnetik anabata ikike, attachable nju.
Akwụkwọ na-acha ọcha blackboard. Na-ejikọta maka akara akara na-acha ọcha, ehicha, ihe kachasị mma.
Emere site na agwakọta ígwè ntụ ntụ na plastic (CPE wdg). Ọ nwere ikike dị mma nke na-anabata ihe, ihe dị mma.
Na-enweghị demagnetized, mgbochi ajari.
N'ịbụ onye na-adụkọta nkwụsi ike, ihe nkwụnye na-acha ọcha agaghị ada ngwa ngwa, ọ ga-adị mkpa ka ị kụọ oghere na gị mgbidi ma nwee ike ịwụnye ọ bụla dị mma dịka oche, ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ.
Gbasara onwe gị gbasara nchekwa onwe gị
More banyere Adhesive Removing Whiteboard
More banyere Magnet Mat
Ngwaahịa : Igwe eji magnetik anabata ihe > Onwe ihe nrapado nke ogwe
Ihe nkedo nke 3M White White Film For Wall
Mpempe akwụkwọ na-emepụta ihe nkiri na-acha odo odo
90x60mm Nwepu onwe onye nlekota obere nwa nku umuaka
Nnukwu ihe nkedo nke onwe onye na-acha ọcha
Ihe nchịkwa nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị mma na ime ụlọ
Akwụkwụ na-ejigide ya
Ede ederede blackboard
Akwụkwọ a na-edozi oge
Akwụkwọ Nkwadebe Aka
Akwụkwọ na-ede akwụkwọ oji
Akwụkwọ Magnet Njikere
Akwụkwụ na-ejigide ya Eke ederede Ede ederede blackboard Akwụkwọ a na-edozi oge Akwụkwọ Nkwadebe Aka Akwụkwọ na-ede akwụkwọ oji Akwụkwọ Magnet Njikere Akwụkwọ mmado